Ihe oyiyi mbụ e mepụtara nke Moto E5 | Gam akporosis
El Moto E4 wepụtara na June nke afọ gara aga, ya mere anyị anaghị atụ anya ka onye nọchiri ya ga-apụta n'oge na-adịghị anya, ọ bụ ezie na nke ahụ apụtaghị na enweghị ozi ọ bụla ruo mgbe ụlọ ọrụ ahụ kpebiri.
Taa onyinyo mbụ metụtara Moto E5 agbapụala, enwere ike ịtọhapụ ya n'afọ a. N'ezie, ọ dịghị ihe ekwuru banyere njirimara ya ma ọ bụ ọnụahịa ya, mana dị ka mgbe niile, ndị mgbasa ozi amalitela ịkọ nkọ.
Ekwe omume atụmatụ nke Moto E5
Ihe mbụ anyị hụrụ na leaked oyiyi nke Moto E5 bụ na ụlọ ọrụ wepụrụ wepụ mkpisiaka agụ n'ihu ma dọba ya n'okpuru igwefoto, nri na ọnọdụ ọ na-hụrụ na ya elu-ọgwụgwụ ngwaọrụ, na mgbakwunye, nke agụ ugbu a nwere Motorola logo n'elu iji mee ka ọ ghara ịhụ ya.
Na n'ihu agaghị enwe bọtịnụ capacitive ma ọ bụ bọtịnụ anụ ahụ, igodo ga-ahụ maka bọtịnụ ndị mebere, anyị na-ahụkwa na ụlọ ọrụ ahụ agbakwunyela akara ya na ala nke ihuenyo ahụ.
Anyị nwekwara ike ịhụ ọkụ ọkụ na-esote igwefoto n'ihu, ebe olu na bọtịnụ ike na-ejigide ọnọdụ ha n'aka nri nke mobile. Moto E5 agaghị anabata teknụzụ USB-C ọhụrụ, kama ọ ga - enwe ọdụ ụgbọ mmiri MicroUSB.
Ihuenyo nke Moto E5 dị ka sentimita ise ma nwee mkpebi zuru oke.
Ọ bụrụ na anyị eleruru anya na onyogho a, anyị ga - ahụ na elekere na ihuenyo ahụ ga - ede ụbọchị Eprel 3, yabụ anyị nwere olile anya na nke a bụ ụbọchị ụlọ ọrụ ahụ na - eweta ngwaọrụ ahụ.
Ọnụahịa ahụ bụ isi ihe ọzọ nke anyị nwere ike ịkọ nkọ, anyị na-atụ anya na a ga-akwụ ụgwọ ngwaọrụ ahụ n'etiti 100 ka 140 euro, dịka onye bu ya ụzọ.
Ka anyị na-eche ka ewepụta ngwaọrụ a n'ihu ọha, anyị ga-aga n'ihu na -ekwupụta data niile na-abịa n'ìhè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Mbụ leaked oyiyi nke Moto E5
Nokia 6 (2018) na Nokia 7 natara mmelite a na gam akporo Oreo